Technical Service - Shandong Guiyuan Yepamberi Ceramics Co, Ltd.
Mushure memakore 'ekunyorera, matekiniki anotarisa mashandiro uye kusakara kweiyo keramiki kune vatengi' mapepa ekugaya. Kugadziriswa kunofanirwa kuitwa nenguva kana paine nzvimbo dzakaputswa kana makomba. Mushure mekudzoreredza uye kumisikidza zvikamu zvekusakara uye kugadzirisa zvikamu zvakaputsika, iyo zvedongo blade inogona kuramba ichingove kushandisa kune imwe nguva, inova inodhura-kuponesa pane kuchinja kazhinji neHDPE blade. Iyo SS 304 bhokisi rinoshambidzwa uye ngura inobviswa.
Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, SICER inopa mhinduro dzakagadziridzwa dzekuita kuri nani chikamu chetambo. Mushure mekuyedza kuoma uye kuita mvura basa, isu tinowana nekugadzirisa matambudziko anogona kuitika pane imwe nzvimbo. Nemapurojekiti mazhinji atakashanda, takaumba yedu YEMAHARA KUSVIRA SYSTEM+.